အောက်ဆုံးက ကြက်တူရွေးတွေက အဲဒီမှာပေါလား..
ဘေးအိမ်က အရင်နေသွားတဲ့ မိသားစုကတော့ ကြက်တူရွှေးတွေ မွေးထားတယ်။
တနေ့ တနေ့ အဲဒီ ငှက်ကြီးတွေ အော်လိုက်ရင် ဗြဲ.. ဗြဲ.. နဲ့ တော်တော် နားဆူတယ်။
သူတို့ အချင်းချင်း ငှက်တန်ဖိုးပြောနေကြတာ ဩဇီမျိုး တကောင်ကို ၁၆သိန်းလောက် တန်တယ် ဆိုလား စလုံးက နေ ခဲရာ ခက်ဆစ် သွားဝယ်တဲ့တယ် ပြောနေကြတာ ကြားမိတယ်။ ဘေးအိမ်အနေနဲ့ကတော့ မြန်မြန်ပြောင်းသွားပါစေလို့ မေတ္တာပဲ ပို့ရတယ်။
အခုတော့ ပြောင်းသွားရှာပြီ။ နားတော်တော် အေးသွားတယ်။
“အဲဒီ ငှက်ကြီးတွေ အော်လိုက်ရင် ဗြဲ.. ဗြဲ.. နဲ့ တော်တော် နားဆူတယ်။”
” ဩဇီမျိုး တကောင်ကို ၁၆သိန်းလောက် တန်တယ် ”
ခွေးကလေးတွေကို အဲဒီလို ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ ပြေးလွှားနေစေချင်တယ် …
ကျွန်မအခုနေတဲ့တိုက်ခန်းရဲ့အောက်ထပ်အခန်းမှာ ခွေးကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ် … သူတစ်ကောင်ထဲနဲ့တင် လုံလောက်တယ် … လှေကားကအသံကြားတိုင်း ဟောင်နေတော့တာပဲ … ကျွန်မစိတ်ထင်တော့ သူ့ကိုအခန်းထဲလှောင်ထားလို့ စိတ်ညစ်ပြီး ဟောင်နေတာနဲ့တူတယ် …
သန့်ပြန့်လှပနေတာ နေချင်စရာပဲ ….
Sydney အကြောင်းတင်တယ် ဆိုကတည်းက FR လို့ ထင်လိုက်သား။ အိမ်ခြံမြေအဝန်းအဝိုင်းတွေက ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အဲလို နေနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ အားကျလိုက်တာ နော်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ အမှိုက်ပုံးကို ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်၊အမှိုက်ကို အမှိုက်ကျုံးသမားပိုက်ဆံပေးသွန်ရပါတယ်၊
မကြာခင်တော့ ပြောင်းလဲဘို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခုလမ်းဘေးအိမ်သာတွေ ပြုပြင်ဘို့ စနေပါပြီ၊
အမှိုက်သိမ်းစံနစ်လည်း ပြင်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြင်ရင် ပြင်လို့ရမှာပါ။
တစ်ချိန်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ အသန့်ရှင်းဆုံးမြို့တော် ရန်ကုန်ဘဝကိုပြန်ရဘို့ တစ်ကနေ ပြန်စကြပါစို့၊
“အရှေ့တောင်အာရှမှာ အသန့်ရှင်းဆုံးမြို့တော် ရန်ကုန်ဘဝ”
To becomea“အသန့်ရှင်းဆုံးမြို့တော်”
” ကျနော်တိုု့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်နေရမှာလဲ ”
ပို့စ် အတွက် FR ကြီး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ပုံမှန် မြင်နေကြ အလှအပ မြင်ကွင်းတွေက ကောင်းသလို အခုလို သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝလေးတွေ
သိရတာ ပိုကောင်းတယ် အမှိုက်ပစ်တဲ့စနစ်ဆို ဗဟုသုတ လဲရ အတုယူလို့လဲရတာပေါ့
(အနီ၊အနက်တို့ဆို ကျွန်တော်တို့က ဂျော်နီလမ်းလျှောက်လောက်သိတာ :D)
ရောက်ဘူးတဲ့သူတွေ ပြောတာ သားပိုက်ကောင်လဲ ပေါတယ်ဆို ?
အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ခြံလေးကို သဘောကျတယ်၊ အလည်လာချင်စရာလေး
I will also post “အလှအပ မြင်ကွင်းတွေ” & “သားပိုက်ကောင်” of Australia.
ခရီးစဉ်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ
တရုပ်မှာ ရောက်နေရင်းလဲ တရုပ်အတွေ့အကြုံလေးတွေ လုပ်ပါဦး တရုပ်မလေးတွေက ဘယ်လိုဆိုတာမျိုးက အစပေါ့
ဩစီရဲ့ မြို့တော် .. Sydney ဒါကြောင့် နာမည်ကြီးတာကိုး … ။ လမ်းတွေကလည်း ကောင်းမှကောင်း … အိမ်လေးတွေ ၊ ပန်းခြံတွေကလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ … ကြက်တူးရွေးတွေကတော့ အတော်ကြီးတယ် … ။ ရာသီဥတုတောင် အဲ့ဒီက ရာသီဥတုက ပိုသာယာနေသလိုပဲ.. ကောင်ကင်ရော .. တိမ်တွေရော … အကုန်လှနေတယ် …. နေလည်း မပြင်းဘူး ထင်ပါရဲ့ .. ။
ဩစီ ရာသီဥတု isalot better than Myanmar.
ဩစီ ရာသီဥတု is same like May Myo ( Pyin Oo Lwin ).
Yes, နေလည်း မပြင်းဘူး
ဩစီ က ဒါကြောင့် နာမည်ကြီးတာကိုး